Muqdisho iyo Kigali – Shalay iyo Maanta ” Yuusuf Garaad oo qormooyin qoraya xitaa hadduu wasiir noqday - Caasimada Online
Home Maqaalo Muqdisho iyo Kigali – Shalay iyo Maanta ” Yuusuf Garaad oo qormooyin...
Muqdisho iyo Kigali – Shalay iyo Maanta ” Yuusuf Garaad oo qormooyin qoraya xitaa hadduu wasiir noqday
Toddobaadkan ayaan mar kale isu maray Muqdisho iyo Kigali. Muqdisho waxay yeelatay Dowlad. Waxay yeelatay kala dambeyn ilaa xad ah. Waddooyin dhowr ah ayaa la dayactiray. Waddooyinka waaweyn badankood nal ayay leeyihiin. Dhowr dhisme oo waaweyn asaan dowladdu lahayn ayaa soo baxay.
Amniga, waddooyinka, nalalka, dhismaha, nadaafadda, dhirta iyo cagaarka iyo nidaamka gaadiidka loo kala hagayo, Kigali waxay ku tallaabsatay horumar weyn.
Yuusuf Garaad Cumar oo hadda ah wasiirka arimaha dibada Xukuumadda Soomaaliya ayaanan wali joojin qorista Qormooyinka xita hadii uu noqday Wasiir Dowladeed , Waxaana wali uu ku mashquulsan yahay qorista qoraallada arrimaha Soomaaliya .